एडोब प्रभाव पछि स्पेनी मा सीसी म्यानुअल क्रिएटिव अनलाइन
एडोब अफ्टर प्रभाव मार्केटमा सब भन्दा शक्तिशाली टाइमलाइन-आधारित सम्पादन सफ्टवेयर हो। यो अनुप्रयोग गति ग्राफिक्स को प्राप्ति को लागी गरीएको छ (यसको शुरुवात २ आयामहरुमा हो, तर जसरी यसलाई अद्यावधिक गरिएको छ यसले थ्रीडी कम्पोनेसनमा काम गर्ने शक्ति प्राप्त गरेको छ), भिडियो मोन्टेज र पक्कै पनि विशेष प्रभाव र पोस्ट उत्पादन को निर्माण.
जटिलता र यसले प्रस्तुत गर्ने सम्भाव्यताले प्रायः हाम्रो कामलाई सुस्त बनाउँछ र यस कारणका लागि, समय बित्दै जाँदा, प्लगइनहरू देखा पर्‍यो जुन लोड घटाउँदै प्रक्रियाको चपलता बढाइरहेको छ। यो संस्करण 6.5..7 र from बाट छ जहाँ यसले उल्लेखनीय विकास हासिल गर्न थाल्छ। आज सीसी संस्करण सबैभन्दा उन्नत र छ यस संस्करणका केहि उल्लेखनीय नयाँ सुविधाहरू हुन्:
El तह ट्र्याकर.
हाईडीपीआई सामग्री दर्शकहरू म्याक कम्प्युटरहरूमा रेटिना प्रदर्शनका लागि।
को कार्यक्षमता सिनेवेयर अद्यावधिक गरियो।
तहहरूमा परिवर्तन र सुधारहरू।
सम्पत्तीमा सुधार र परिवर्तनहरू।
प्रोजेक्ट फलकमा फोल्डरहरू तान्दा स्वचालित रूपमा खोलिन्छन्।
अभिव्यक्ति भाषा मेनूमा नयाँ गुणहरू।
बाह्य उपकरणहरू (म्याक ओएस) मा पूर्वावलोकन सक्षम
3D रेन्डररका लागि नयाँ अप्टिक्स पुस्तकालय रे ट्रेसि withको साथ।
थ्रीडी क्यामेरा ट्रैकरको विश्लेषण चरणमा प्रदर्शन सुधार र तनाव स्टेबिलाइजर।
यो सिफारिश गरिन्छ कि यी सुविधाहरूको पूर्ण फाइदा लिन हामीसँग टेक्निकल सहयोग छ। यसैले आज म तपाईंलाई स्पेनिशमा म्यानुअल छोड्छु जसमा बाह्य लिंकहरूको साथ साना ट्यूटोरियलहरू छन् र यसको सामग्री स्पेनिशमा छ (केही बाह्य लिंकहरू जस्तै भिडियोहरू र अरू अ English्ग्रेजीमा मात्र हुन्)। तपाईं यसलाई PDF ढाँचामा फेला पार्नुहुनेछ र तपाईं यसलाई यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ:
एडोब प्रभाव पछि स्पेनिश मा सीसी म्यानुअल.
यसको मजा लिनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » एडोब प्रभाव पछि स्पेनिश मा सीसी म्यानुअल